Imogen Poots sawiro qaawan & Muuqaallo galmo iskudubarid - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Imogen Poots sawiro qaawan & Muuqaallo galmo iskudubarid
Fiiri aktarada timaha cad ee Boqortooyada Midowday, Imogen Poots sawiro qaawan iyo sawiro kulul, galmo iyo muuqaalo qaawan oo ay ku sameysay xirfadeeda. Waxay bilowday inay naga dhigto geesinimo 2007, waxayna ku jirtaa maskaxdeena in ka badan toban sano! Kaliya sii wad duubista!
Imogen Poots waa atirisho Ingriis ah. Waxay ku ciyaaray Tammy filimkii naxdinta badnaa ee '28 Toddobaadyo Kadib'. Iyo sida Linda Keith ee 'Jimi: All Is My My Side', Debbie Raymond ee 'Muuqaalka Jacaylka', iyo Julia Maddon ee ' Baahida Xawaare ‘. Sanadkii 2016 waxay ku jileysay Kelly Ann taxanaha Showtime ee ‘Roadies’.
Imogen Poots-ka qaawan iyo muuqaalada galmada
Waa kan Imogen Poots oo muujinaya boogo qaawan, markay sariirta jiifsato oo nin uu surwaalkeeda iska siibto. Ka dib wuu ku dul dul dhacayaa xoogaa ka hor intaysan hakad gelin inay in muddo la hadlaan. Ninka ayaa markaa dib u bilaabaya inuu siiyo galmada afka oo ay taaho.
Mar labaad Imogen Poots qaawan, ayaa la arkay isagoo sariir la jiifa nin. Waxaan ku aragnaa iyada dhabarka iyada oo ay u muuqanayso timaheeda, maadaama uu ninku ku dul dhacayo iyada. Marka xigta, wuu kacaa oo wuxuu nuugaa ibta naaska ka hor intaanuu la seexan. Kani waa goobteedii ugu fiicnayd, waxaan u malaynayaa sidaas…
Kadib waxaan leenahay Imogen Poots oo u galmoonaya nin ka soo horjeeda dhinaca barkadda dabaasha. Gacanta ninku qoorteeda, qoortiisana gacanta. Kadib waxay iska dhigtaa inay dhaafto oo way qososhaa markii uu isku dayo inuu toosiyo.
'Waddo Layn ah'
Imogen Poots waxay xidhan yihiin goonnada isbitaalka ee dhabarka ka furan. Way soo jeesaneysaa si ay u muujiso badhideeda qaawan.
Markaas waxaan ku arki karnaa jilaaga jilicsan ee jilicsan Imogen Poots oo sariirta sariirta saaran. Waxay u galmoonaysaa nin, boobkeeda bidix daaqad ayaa laga arki karaa.
'Waan ogahay in intaani run tahay'
Ugu dambeyntiina, laakiin uguyaraan, Imogen Poots ayaa si kooban u bixinaysa aragti cakiran oo ku saabsan buugeeda. Waxay u janjeeraa inay dhunkato nin sariirta sariirta iyadoo dusha sareysa. Waxaan markaa ka aragnaa iyada oo garbaha qaawan kor u taagan iyada oo taagan oo labbisanaysa.
Imogen Poots sawiro galmo ah
Ka sokow in badan oo daqiiqado qaawan, oo Imogen Poots ay ku soo bandhigeen boobkeeda, dameerkeeda, iyo xubinta taranka, waxaan soo ururinnay qaar badan oo ka mid ah xiisaha iyo sawirrada yar yar. Halkan waxay na siisay muuqaalkeeda bikinimo, kala-goynta, iyo cagaha… Sidoo kale lugaha iyo caloosha qaawan. Kaliya rog oo kaalay ninyahow, naagtani way kulul tahay!
cara delevingne qaawan xaday
Kate Upton video iCloud
brie Alison xaday sawirka